Xuubka, heerkulka cimilada Waqooyiga Baasifiga | Saadaasha Shabakadda
Waxaad maqashay oraahda ah "xaqiiqadu waa qariib badan tahay mala'awaalka" kumanaan jeer. Tani waxay dhacdaa markii tiro badan oo kalluun kalluun ah ay u guuraan waqooyiga badweynta Baasifigga iyo kumanaan shaabadood oo gaajo ugu hartay xeebta Kaliforniya. Panorama waxaa sababa isbeddelada kuleylka biyaha badda ayaa dhacay 2016. Dhacdadan waxaa loogu yeeray magaca "La mancha", oo laga soo qaatay Ingiriiska Xuubka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa buubbuhu yahay iyo saamaynta uu ku leeyahay deegaanka ku hareeraysan. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato, kani waa boostadaada.
1 Waa maxay buroolaha
2 Saamaynta buqshadda nidaamyada deegaanka badda
3 Nabarka ayaa soo muuqanaya
Waa maxay buroolaha
Waxaan ka hadleynaa xaalad cakiran oo kuleylka biyaha badda ee aagga Waqooyiga Baasifigga. Isbeddelkan ku yimid heer kulka waxa uu lahaa dhawr koox oo saynis ah oo darsaya sababta ay biyuhu ugu kululaadeen 4 darajo Celsius oo ka sarraysa heerka caadiga ah ee lakabyada dusha sare. Cilladaan heer kulka ayaa ka fidday Mexico ilaa Alaska iyo waxay qabsatay dhul ballaadhan 1600 kiiloomitir.
Saynisyahannada darsay cilmigan ayaa ahaa koox cilmi baarayaal ah oo ay hoggaaminayeen khubaro ka tirsan Jaamacadda Washington. Dhowr maqaal ayaa lagu daabacay joornaalka sayniska Warqadaha Cilmi-baarista Geophysical sharaxaya sababaha suurtagalka ah ee La Mancha. Waxay horeyba u bilaabeen inay ogaadaan kororka kuleylka inta lagu jiro xilliga deyrta ee 2013 iyo horraantii 2014. Jirkaan biyaha ah uma qaboobo sida caadiga ah, sidaa darteed xilligii gu'ga ee isla sannadkaas wuxuu horeyba uga sii kululaa sidii aan waligiis hore loogu arag waqtigaas sanadka.
Ereyga 'Bubb' waxaa loo sameeyay sidii uu u lahaa qaab wareeg ah oo ah buro tilmaamaysa aagagga heer kulka si aan caadi ahayn ugu kordhay. Xaqiiqadani waxay dad badan ka dhigtay inay u maleeyaan inay ahayd nooc digniin ah in kuleylka adduunka uu sababayo kororkan aan caadiga ahayn ee kuleylka biyaha Baasifigga iyo inay saameyn ku yeelan karto cimilada inta badan Waqooyiga Ameerika.
Saamaynta buqshadda nidaamyada deegaanka badda
Sidaan ognahay, nidaamyada deegaanka ee dabiiciga ah, ha ahaadeen badda ama berriga, waxay leeyihiin isku dheelitirnaan deegaan. Isku dheelitirnaantaani waa mid ka badan ama ka yar joogto ah waqtiga waana nooc ka mid ah iswaafaqsiga u dhexeeya dhammaan qiimayaasha doorsoomayaasha ee saameeya nidaamka deegaanka. Doorsoomayaasha sida heerkulka, nidaamka dabaysha, heerka roobka, jiritaanka flora iyo fauna, pH ciidda, nafaqooyinka, iwm.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa saamaynta nidaamka deegaanka oo dhan ka dib isbeddelka degdegga ah ee mid ka mid ah qiyamka is-beddelayaasha ugu muhiimsan ee saameynaya xaaladda nidaamka deegaanka: heerkulka. Waxaan ku fahmi karnaa in nidaamka deegaanka badda, heer kulku yahay mid ka mid ah is-beddelka ugu muhiimsan si loo abuuro xaddiga ay ku noolaan karaan xayawaanka iyo dhirta labadaba.
Haddii qiyamka celceliska heerkulka ay ku noolyihiin aagaggaas inta badan caadeystaan ​​wax laga beddelo kala duwan oo ah 4 darajo centigrade ka caadiga ah, waxa ugu horeeya ee aad leedahay waa saameyn taban oo kala duwan. Biyaha kulul waxay saameyn weyn ku yeesheen nidaamyada deegaanka, iyagoo dhibaato weyn ku abuuray silsiladda cuntada ee noocyo badan ay ku tiirsanaayeen. Haddii noocyada ugu nugul markooda ay yihiin bilowga silsiladda cuntada, nidaamka deegaanka ayaa si ba'an u saameynaya isbeddelkan ku yimid qiimaha heerkulka.
Daraasadaha la daabacay waxay la xiriireen barta biyaha kulul oo leh isbeddelo ku saabsan dhacdooyinka saadaasha hawada ee cadaadiska sarreeya ee xilliga qaboobaha ee sannadka 2013-2014. Dhacdooyinkaan saadaasha hawada ayaa isbeddel ku yimid iyadoo ay ugu wacan tahay Oscillation-ka Baasifigga iyo dhacdada El Niño. Khubaradu waxay isku dayeen inay soo bandhigaan indho indhayn kaladuwan oo ku saabsan habsocodyadii dhacay waqtigaas laakiin ma soo saari karaan gabagabada ku saabsan baaxadda ama xiriirka ay la leeyihiin geeddi-socodka kale ee faragelinta ku haya isbedelka cimilada.
Waxaa loo maleynayay in isbeddeladan bilihii la soo dhaafay ay si gaar ah u keeneen saameynta isbeddelka cimilada, tan iyo dhammaanba dhacdooyinkan si isbadalada kala duwan, sida kuwa lagu arkay heerkulka sii kordhaya, ay u noqon doonaan kuwo caan ah sannadaha soo socda.
Nabarka ayaa soo muuqanaya
Markii loo maleynayay in tani aysan mar kale dhici doonin, Sebtember 21, 2019, hirarka kuleylka kale ee badda ayaa la ogaaday oo ay soo saartay kororka heerkulka biyaha ee aan caadiga ahayn oo dheeraaday meel cayiman. Kordhinta heer kulka si ay saameyn ugu yeelato, waa inay socotaa ugu yaraan muddo shan maalmood ah.
Markii shaki laga qabo in ifafaalahan ay si isdaba joog ah u dhacayaan isbeddelka cimilada awgeed, daraasad ayaa la sameeyay iyo maqaal lagu daabacay joornaalka Isbedelka Cimilada Dabeecadda in wuxuu sheegayaa in dhacdooyinkan ay 17% ka dheer yihiin inta udhaxeysa 1987 iyo 2016. Daraasaddan cusub waxay xiriirisay muuqaalka hirarka kuleylka badda iyo saameynta ay ku yeelaneyso nidaamka deegaanka. Maaddaama ay baddu sii kululaaneyso marba marka ka dambeysa kororka kuleylka adduunka, mowjadaha kuleylka badda ayaa sameysmaya si isdaba-joog ah oo waara.
Haddii tani sii socoto, saameynta nidaamka deegaanka ayaa ka sii weynaan doona. Dhacdadii ugu dambeysay ee Blob waxay si dhab ah u faragelinaysaa nolosha badaha bariga Pacific, gaar ahaan qalimaanta aan ognahay inay aad ugu nugul yihiin isbeddelada heerkulka. Intaas waxaa sii dheer, waxay sababtay masiibooyin dhaqaale oo ku habsaday dhammaan qeybaha kalluumeysiga maaddaama kalluumeysatada ay yaraadeen.
Tusaale ahaan, xayawaannada sida aadka ah ay u saameysay kororka heer kulka ayaa ah kuwa aan u dhaqaaqi karin dhanka biyaha qabow noloshoodiina ay halis weyn ku jirto. Hadda saynisyahannadu waxay sugayaan duufaan kuleylka badda cusub ah oo waxyeello u geysta si ay u horumariyaan, iyagoo duubay balastar kale oo cusub oo ku saabsan Badweynta Baasifigga. Waxay yihiin nabar weyn oo la duubay leeyahay heerkul ka sarreeya 3 darajo oo ka sarreeya qiyamka celceliska.
Waxaan rajeyneynaa in cilladahaan ay joojiyaan inay saameyn ku yeeshaan nolosha badda. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto buqshadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Xuubka
Qaabka atomiga Thomson